Othengisa ngomzimba uxoxa indaba yakhe: ucansi, ubuhlungu nomzabalazo wokuphila | Scrolla Izindaba
Othengisa ngomzimba uxoxa indaba yakhe: ucansi, ubuhlungu nomzabalazo wokuphila
Elangazelela umsebenzi, uNomsa waba ngumahosha eneminyaka engama-22 ngemuva kokuhlala izinyanga eziyisithupha ejele – futhi impilo yakhe yaba isihogo kusukela lapho.
UNomsa Dlamini (okungelona igama lakhe langempela), manje oneminyaka engama-39, uthe impilo yakhe yashintsha ngenkathi ethola ukuthi isoka lakhe lithandana nomngani wakhe omkhulu. UNomsa walwa nesoka lakhe, nomngani wakhe, wabe eseboshelwa ukushaya.
“Ngenkathi ngiphuma ejele ngase ngiphelelwe ngumsebenzi wokukilina ehhotela e-Sandton. Bengingenawo umthombo wemali,” uyasho.
Wayenezingane ezimbili ezazidinga ukudla nokuxhaswa ngokwezimali.
“Iqale ngenkathi owesilisa engithembisa imali yokuthi ngilale naye. Kwakuyithuba lokondla izingane zami ngakho ngakwenza, ”uyasho.
“Bese kwaba omunye wesilisa nomunye futhi. Kwaba umthombo wokuthola imali. Ngithole imali ngakwazi ukondla umndeni wami futhi ngizinakekele ngokusebenzisa umzimba wami. Ngaqala ukusebenzisa izidakamizwa ukuze ngiqhubeke nosuku. ”
Uthe zonke izinsuku kuyimpi ukuphila.
“Engikufunayo nje ukudla etafuleni kimi nasezinganeni zami ngakho kumele ngilale nabantu engingabazi ukuze ngithole leyo mali,” uyasho.
Kodwa-ke kwafika izidakamizwa.
Uthe ingcindezi yokuthi aphile ibinkulu kakhulu kangangokuthi wathatha isinqumo sokuthatha impilo yakhe njengendlela yokuphuma.
“Sengizame ukuzibulala amahlandla amane,” uyasho.
Kowezi-2016, waziphonsa esuka kuvulandi wesitezi sesithathu kodwa akazange afe. Wavele waphuka ingalo yangakwesobunxele. Phakathi kowezi-2016 nowezi-2019 wazama ukuzibulala ngokuphuza amaphilisi.
“Ngisaphupha ngokuba nomshado ojabulisayo futhi ngihlale nomyeni wami nezingane zami njengelungu lomndeni omuhle, ojabule.”